Onyeikpe nke obodo dum - Rabbi Michael Avraham
Onyeikpe nke obodo dum
Nzaghachi > Atiri: Omume > Onyeikpe nke obodo dum
Nye Ajụrụ ya afọ 3 gara aga
Olee otú onye rabaị si ghọta ajụjụ Ebreham bụ́ ‘Onyeikpe nke ụwa dum agaghị eme ihe ziri ezi’? Omume ọma ọ na-ejikọta na-enweghị afọ? Ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ bụrụ na omume bụ ihe dị mkpa naanị ịgbaso uche Chineke, ma e wezụga ya ọrụ omume enweghị ihe ọ pụtara, olee otú Chineke ga-esi 'jụọ' banyere enweghị ido onwe ya n'okpuru omume?
mikyab Ndị ọrụ Zara afọ 3 gara aga
Kedu ihe bụ nsogbu? Ọ bụrụgodị na omume na-adabere nanị n'ike nke Chineke, Abraham jụrụ ya banyere enweghị nkwekọrịta.
Onye ikpe ikpe ikpeazụ Zara 3 afọ gara aga
Ebreham amaghị na ọ na-agwa Chineke okwu.
Ọ ghọtara na ọ na-agwa onye nwere ikike nke bịara ime ihe ziri ezi. N’ihi ya, ọ na-agbalị iji ire ụtọ ghọzie ya site n’ịchịkọta ikpebi ihe omume kwesịrị ekwesị bụ.
David Siegel Zara 3 afọ gara aga
Gịnị ka ịghara ịma na ọ na-agwa Chineke pụtara?
Ebe a bụ mmadụ atọ guzo n’elu ya, otu n’ime ha bụ H. ma ọ maghị ya n’oge emume ahụ niile
Torah na-agwa anyị na ọ bụ ya na okwu ime ya mana Abraham amaghị.
Ya mere, ọ pụrụ ịbụ na Chineke n'ime Jesus ??
Ọ bụrụ na ịchọta agwọ na-arafu mmadụ na ịnyịnya ibu na-ekwu okwu mgbe ahụ ihe ọ bụla nwere ike ịbụ.